ဒီအခြိနျမှာ ရျောနယျဒိုအတှကျ ဖာဂူဆနျ ဘယျလောကျတောငျဂုဏျယူနမေလဲ….? – Premier League Special
January 11, 2021 yeminn Article 0
ရျောနယျဒိုရယူနတေဲ့ စံခြိနျမှတျတမျးတှကေတော့ တဈပှဲပွီး တဈပှဲ အံ့မခနျးပါပဲ။ အဲဒီလို အနအေထားမြိုးမှာ နညျးပွကွီးဖာဂူဆနျ ကတော့ ဂုဏျယူဝမျးမွောကျနမှောသခြောပါပဲ။
ခုခြိနျမှာ ယူနိုကျတကျနဲ့ စီရျောနယျဒို ဘာမှမဆိုငျဘူးဆိုပမေယျ့ ဒိုလေးရဲ့ ပရျောဖကျရှငျနယျကစားသမားဘဝမှာ စပိုးတငျးလစ်စဘှနျးကနေ ယူနိုကျတကျကစားသမားဘ၀ ခံယူပွီးမှ အောငျမွငျတဲ့ လမျးပျေါကို ရောကျခဲ့တာပါ။ စပို့တငျးအသငျးတို့၊ ဒိုလေးငယျငယျက ကစားခဲ့တဲ့ အသငျးတို့ဘာတို့ အဲဒါတှရေဲ့ ကြေးဇူးကနျးခိုငျးတာတော့ မဟုတျပါဘူး။
စီရျောနယျဒို ဆိုတဲ့ ကြောကျကောငျးတဈပှငျ့ ထှနျးလငျးတောကျပ လငျးလကျဖို့ ယူနိုကျတကျကနညျးပွကွီး ဖာဂူဆနျရဲ့ သှနျသငျမှုတှေ၊ ကာကှယျပေးခဲ့မှုတှကွေောငျ့သာ အဓိကကခြဲ့တာပါ။ နောကျမှသာ ရီးရဲလျမကျဒရဈအသငျးက ကောကျစားလုပျသှားခဲ့တာပါ။
ဖခငျဆုံးပါးသှားခြိနျမှာ မိခငျကိုသာ အဖျောပွုနခေဲ့တဲ့ စီရျောနယျဒို ဟာ ဖာဂူဆနျကို သူ့ရဲ့ ဖခငျတဈယောကျလိုတှယျတာခဲ့ပါတယျ။ ရီးရဲလျ ကိုရောကျပွီး တဈနှဈအကွာမှာ ဖာဂူဆနျက သူအနားမယူခငျအခြိနျမှာတုနျးက စီရျောနယျဒို ကို ယူနိုကျတကျအသငျးဆီပွနျချေါဖို့ ပွောကွားခဲ့ပွီး စီရျောနယျဒို ကလညျးပွနျလာခဲ့မယျလို့ ကတိတှေ ပေးခဲ့တယျလို့ ဖာဂူဆနျက အဲ့သညျ့အခြိနျကအကွောငျးတှကေို ပွနျလညျပွောပွခဲ့ပါသေးတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဖာဂူဆနျက အနားယူသှားခဲ့တာကွောငျ့ ဒီအပွောငျးအရှကေ့ မဖွဈလာခဲ့ပါဘူး။
ဒါကွောငျ့လညျး စီရျောနယျဒိုက တဈခြိနျခြိနျမှာ ယူနိုကျတကျဆီပွနျလာခငျြကွောငျးပွောခဲ့တာပါ။ ခုခြိနျထိလညျး နညျးပွကွီး ဖာဂူဆနျနဲ့ ဒိုလေး အဆကျအသှယျရှိနသေလို၊ ယူနိုကျတကျက ကစားသမား အသဈ ချေါယူတဲ့ တခြို့ ကိစ်စတှမှောလညျး စီရျောနယျဒို ပါဝငျကူညီပေးနတောပါ။
မနေ့ ညက ကစား သှားခဲ့တဲ့ စီးရီးအေ ပှဲစဉျ အပွီး မှာတော့ ရျောနယျဒို ဟာ ဘောလုံး သမိုငျး တဈလြောကျ ဂိုး အမြားဆုံး သှငျးယူ နိုငျတဲ့ ကစား သမား တဈဦးနဲ့ ပူးတှဲ ဖွဈလာခဲ့ ပါပွီ ။
ဆာဆူအိုလို အသငျး ကို ၃ – ၁ နဲ့ အနိုငျ ရခဲ့တဲ့ ပှဲမှာ ရျောနယျဒို ဟာ ပှဲပွီးခါနီးအခြိနျ (၉၂)မိနဈမှာ (၁) ဂိုး သှငျးပေး ခဲ့ပွီး ဂြိုဆပျ ဘီကနျ ရဲ့ ဂိုး အရေ အတှကျ ကို လိုကျမီ သှားခဲ့ ပါတယျ ။အဲဒါကွောငျ့ ထာဝရ ဂိုးသှငျး ဘုရငျ ဘှဲ့ ကို ပူးတှဲ ရယူ နိုငျခဲ့ပါပွီ။
ရျောနယျဒိုဟာ ဂြိုဆပျ ဘီကနျ ရဲ့ 759 ဂိုး စံခြိနျ ကို လိုကျမီ နိုငျခဲ့ တာဖွဈပွီး၊ နောကျထပျ တဈဂိုး သှငျးလိုကျမယျ ဆိုရငျတော့ ရျောနယျဒို ဟာ ဘောလုံး သမိုငျး တဈလြောကျ ဂိုးသှငျး အမြားဆုံး ဆိုတဲ့ ဂုဏျပုဒျ ကို တဈယောကျတညျး လှဲပွောငျး ရယူ နိုငျတော့ မှာ ဖွဈသလို သမိုငျးစာမကျြနှာ အသဈတဈခုကိုလညျး ရေးထိုးတော့မှာပါ။ ရျောနယျဒိုဆိုတဲ့ ကစားသမားရဲ့ စှမျးဆောငျရညျတှဟောဒီလောကျနဲ့တော့ မတငျးတိမျနိုငျသေးပဲသူရေးထိုးထားတဲ့စံခြိနျမှတျတမျးတှလေညျးရှိနပေါသေးတယျ။
အဲ့သညျ့ စံခြိနျတှထေဲမှာ အမှတျပေး ပွိုငျပှဲတှမှော (၁၅) ရာသီ ဆကျတိုကျ သှငျးဂိုး (၁၅) ဂိုး ကို ရယူ နိုငျတဲ့ တဈဦး တညျးသော ကစား သမားလညျး ဖွဈလာခဲ့ ပါတယျ ။ ရျောနယျဒို ဟာ ၂၀၀၆ – ၂၀၀၇ ဘောလုံး ရာသီ မှာ ယူနိုကျတကျ အတှကျ အမှတျပေး ပှဲ 17 ဂိုး သှငျးယူ ရာကနေ ယခု ၂၀၂၀ – ၂၁ ရာသီ အထိ ၁၅ ရာသီ ဆကျတိုကျ မှာ ၁၅ ဂိုး နဲ့ အထကျ သှငျးယူ နိုငျခဲ့တာပဲ ဖွဈ ပါတယျ ။
အသငျးလိုကျ ခှဲခွား ကွညျ့မယျ ဆိုရငျတော့ ရျောနယျဒိုဟာ စပို့တငျးအသငျးမှာ ၅ဂိုး ၊ ယူနိုကျတကျ အသငျးမှာ ၁၁၈ဂိုး ၊ ရီးရဲလျမကျဒရဈ အသငျးမှာ ၄၅၀ဂိုးနဲ့ ဂြူဗငျတပျ အသငျးမှာ ၈၄ဂိုး ၊ ပျေါတူဂီအသငျး မှာ (၁၀၂)ဂိုး အထိ သှငျးယူ ထားပါတယျ။
ဆကျလကျပွီး ဂိုးတှသှေငျးနမှော ဖွဈပွီး အသကျကွီးလေ ခွစှေမျးထကျလေ ဖွဈတဲ့ စီရျောနယျဒိုကိုတော့ နညျးပွကွီး ဖာဂူဆနျကဂုဏျယူနမှေသခြောပါတယျ။
နောကျထပျပှဲစဉျတဈခုခုမှာ စီရျောနယျဒိုသာ ဂိုးထပျသှငျးယူခဲ့ပွီး ဘောလုံးသမိုငျးမှာ စံခြိနျသဈတဈခု ရေးထိုးလာနိုငျခဲ့မယျဆိုရငျ နညျးပွကွီး ဖာဂူဆနျရဲ့ ဂုဏျပွုစကားတှေ၊ မှတျခကျြပေးမှုတှကေို စီရျောနယျဒိုနဲ့တဈကမ်ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ သူ့ရဲ့ဘောလုံးပရိသတျတှကေ ကွားခငျြနမေယျဆိုတာ သခြောနပေါတယျ….
ဒီအချိန်မှာ ရော်နယ်ဒိုအတွက် ဖာဂူဆန် ဘယ်လောက်တောင်ဂုဏ်ယူနေမလဲ….?
ရော်နယ်ဒိုရယူနေတဲ့ စံချိန်မှတ်တမ်းတွေကတော့ တစ်ပွဲပြီး တစ်ပွဲ အံ့မခန်းပါပဲ။ အဲဒီလို အနေအထားမျိုးမှာ နည်းပြကြီးဖာဂူဆန် ကတော့ ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်နေမှာသေချာပါပဲ။ ခုချိန်မှာ ယူနိုက်တက်နဲ့ စီရော်နယ်ဒို ဘာမှမဆိုင်ဘူးဆိုပေမယ့် ဒိုလေးရဲ့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကစားသမားဘဝမှာ စပိုးတင်းလစ္စဘွန်းကနေ ယူနိုက်တက်ကစားသမားဘ၀ ခံယူပြီးမှ အောင်မြင်တဲ့ လမ်းပေါ်ကို ရောက်ခဲ့တာပါ။ စပို့တင်းအသင်းတို့၊ ဒိုလေးငယ်ငယ်က ကစားခဲ့တဲ့ အသင်းတို့ဘာတို့ အဲဒါတွေရဲ့ ကျေးဇူးကန်းခိုင်းတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
စီရော်နယ်ဒို ဆိုတဲ့ ကျောက်ကောင်းတစ်ပွင့် ထွန်းလင်းတောက်ပ လင်းလက်ဖို့ ယူနိုက်တက်ကနည်းပြကြီး ဖာဂူဆန်ရဲ့ သွန်သင်မှုတွေ၊ ကာကွယ်ပေးခဲ့မှုတွေကြောင့်သာ အဓိကကျခဲ့တာပါ။ နောက်မှသာ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းက ကောက်စားလုပ်သွားခဲ့တာပါ။ ဖခင်ဆုံးပါးသွားချိန်မှာ မိခင်ကိုသာ အဖော်ပြုနေခဲ့တဲ့ စီရော်နယ်ဒို ဟာ ဖာဂူဆန်ကို သူ့ရဲ့ ဖခင်တစ်ယောက်လိုတွယ်တာခဲ့ပါတယ်။ ရီးရဲလ် ကိုရောက်ပြီး တစ်နှစ်အကြာမှာ ဖာဂူဆန်က သူအနားမယူခင်အချိန်မှာတုန်းက စီရော်နယ်ဒို ကို ယူနိုက်တက်အသင်းဆီပြန်ခေါ်ဖို့ ပြောကြားခဲ့ပြီး စီရော်နယ်ဒို ကလည်းပြန်လာခဲ့မယ်လို့ ကတိတွေ ပေးခဲ့တယ်လို့ ဖာဂူဆန်က အဲ့သည့်အချိန်ကအကြောင်းတွေကို ပြန်လည်ပြောပြခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖာဂူဆန်က အနားယူသွားခဲ့တာကြောင့် ဒီအပြောင်းအရွှေ့က မဖြစ်လာခဲ့ပါဘူး။
ဒါကြောင့်လည်း စီရော်နယ်ဒိုက တစ်ချိန်ချိန်မှာ ယူနိုက်တက်ဆီပြန်လာချင်ကြောင်းပြောခဲ့တာပါ။ ခုချိန်ထိလည်း နည်းပြကြီး ဖာဂူဆန်နဲ့ ဒိုလေး အဆက်အသွယ်ရှိနေသလို၊ ယူနိုက်တက်က ကစားသမား အသစ် ခေါ်ယူတဲ့ တချို့ ကိစ္စတွေမှာလည်း စီရော်နယ်ဒို ပါဝင်ကူညီပေးနေတာပါ။ မနေ့ ညက ကစား သွားခဲ့တဲ့ စီးရီးအေ ပွဲစဉ် အပြီး မှာတော့ ရော်နယ်ဒို ဟာ ဘောလုံး သမိုင်း တစ်လျောက် ဂိုး အများဆုံး သွင်းယူ နိုင်တဲ့ ကစား သမား တစ်ဦးနဲ့ ပူးတွဲ ဖြစ်လာခဲ့ ပါပြီ ။ ဆာဆူအိုလို အသင်း ကို ၃ – ၁ နဲ့ အနိုင် ရခဲ့တဲ့ ပွဲမှာ ရော်နယ်ဒို ဟာ ပွဲပြီးခါနီးအချိန် (၉၂)မိနစ်မှာ (၁) ဂိုး သွင်းပေး ခဲ့ပြီး ဂျိုဆပ် ဘီကန် ရဲ့ ဂိုး အရေ အတွက် ကို လိုက်မီ သွားခဲ့ ပါတယ် ။အဲဒါကြောင့် ထာဝရ ဂိုးသွင်း ဘုရင် ဘွဲ့ ကို ပူးတွဲ ရယူ နိုင်ခဲ့ပါပြီ။
ရော်နယ်ဒိုဟာ ဂျိုဆပ် ဘီကန် ရဲ့ 759 ဂိုး စံချိန် ကို လိုက်မီ နိုင်ခဲ့ တာဖြစ်ပြီး၊ နောက်ထပ် တစ်ဂိုး သွင်းလိုက်မယ် ဆိုရင်တော့ ရော်နယ်ဒို ဟာ ဘောလုံး သမိုင်း တစ်လျောက် ဂိုးသွင်း အများဆုံး ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ် ကို တစ်ယောက်တည်း လွှဲပြောင်း ရယူ နိုင်တော့ မှာ ဖြစ်သလို သမိုင်းစာမျက်နှာ အသစ်တစ်ခုကိုလည်း ရေးထိုးတော့မှာပါ။ ရော်နယ်ဒိုဆိုတဲ့ ကစားသမားရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေဟာဒီလောက်နဲ့တော့ မတင်းတိမ်နိုင်သေးပဲသူရေးထိုးထားတဲ့စံချိန်မှတ်တမ်းတွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်။ အဲ့သည့် စံချိန်တွေထဲမှာ အမှတ်ပေး ပြိုင်ပွဲတွေမှာ (၁၅) ရာသီ ဆက်တိုက် သွင်းဂိုး (၁၅) ဂိုး ကို ရယူ နိုင်တဲ့ တစ်ဦး တည်းသော ကစား သမားလည်း ဖြစ်လာခဲ့ ပါတယ် ။ ရော်နယ်ဒို ဟာ ၂၀၀၆ – ၂၀၀၇ ဘောလုံး ရာသီ မှာ ယူနိုက်တက် အတွက် အမှတ်ပေး ပွဲ 17 ဂိုး သွင်းယူ ရာကနေ ယခု ၂၀၂၀ – ၂၁ ရာသီ အထိ ၁၅ ရာသီ ဆက်တိုက် မှာ ၁၅ ဂိုး နဲ့ အထက် သွင်းယူ နိုင်ခဲ့တာပဲ ဖြစ် ပါတယ် ။
အသင်းလိုက် ခွဲခြား ကြည့်မယ် ဆိုရင်တော့ ​ရော်နယ်ဒိုဟာ စပို့တင်းအသင်းမှာ ၅ဂိုး ၊ ယူနိုက်တက် အသင်းမှာ ၁၁၈ဂိုး ၊ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ် အသင်းမှာ ၄၅၀ဂိုးနဲ့ ဂျူဗင်တပ် အသင်းမှာ ၈၄ဂိုး ၊ ပေါ်တူဂီအသင်း မှာ (၁၀၂)ဂိုး အထိ သွင်းယူ ထားပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီး ဂိုး​တွေသွင်း​နေမှာ ဖြစ်ပြီး အသက်ကြီး​လေ ​ခြေစွမ်းထက်​လေ ဖြစ်တဲ့ စီ​ရော်နယ်ဒိုကိုတော့ နည်းပြကြီး ဖာဂူဆန်က​ဂုဏ်ယူ​နေမှသေချာပါတယ်။ နောက်ထပ်ပွဲစဉ်တစ်ခုခုမှာ စီ​ရော်နယ်ဒိုသာ ဂိုးထပ်သွင်းယူခဲ့ပြီး ဘောလုံးသမိုင်းမှာ စံချိန်သစ်တစ်ခု ရေးထိုးလာနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် နည်းပြကြီး ဖာဂူဆန်ရဲ့ ဂုဏ်ပြုစကား​တွေ၊ မှတ်ချက်ပေးမှု​တွေကို စီရော်နယ်ဒိုနဲ့တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ သူ့ရဲ့ဘောလုံးပရိသတ်တွေက ကြားချင်နေမယ်ဆိုတာ သေချာနေပါတယ်….
ယာဂနျကလော့ဟာ သူ့အတှကျ ဖခငျသဖှယျဖွဈတယျလို့ လီဝနျဒေါစကီး ဆို